Madaxweyne Xasan: Haadi ayaan aqoonsanahay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
29th March 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad ka jeediyay shir madaxeedka waddamada xubnaha ka ah Jaamacadda Carabta oo shalay ka furmey magaalada Sharm El Sheikh ee dalka Masar.
“Waxa inoogu muhiimsan dhammaan waxyaabaha aan qabaneyno wa nabadgelyada, dadaal badan ayaanna sameyney, walow kooxda nabadda ka soo horjeeda ay mar walba isku daydo inay carqalad abuurto. Waad wada maqasheen waxay shaley ka sameeyaan Muqdisho, iyagoo naf la caari ah ayay weerareen hotel ay ku sugnaayeen shacab dalkooda iyo dadkooda wax u qabanaya. Dad muhiim ah ayaan ku weyney, lakin taasi nagama hor istaageyso sii wadista dagaalka aan ku doooneyno inaan gebi ahaanba ku tirtirno, kooxda oo goobo yar haatan ku soo uruurey, ayna ka muuqato xaalad quus ah. Waxaana Jaamacadda Carabta ka codsaneynaa inay iyana gacan ka geysato sidii aan u dhameystiri lahayn barnaamijka dowladda ee amniga iyo xasilinta” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud.
Dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Yemen ayaa ka cabsi qaba in dhibaato kasoo gaarato taageerada dowladda Soomaaliya siisay mowqifka Jaamacadda Carabta ah ee ah la weeraro Xuuthuyiinta.